Akpama App Iji Sochie Text Ozi On na ekwentị ọzọ ?
App Iji Sochie Text Ozi On na ekwentị ọzọ
Ọ bụrụ na, dị ka ọtụtụ ndị si n'ebe, Ị nwere sneaking nrutuaka na di gị nwere ike ịbụ ka ọ dị mma na e nwere ike na-akpọ gburugburu, i nwere ike inwe mmasị ịmara otú i nwere ike ledoo ya ederede ozi?
Ọ bụ ihe ezi mgbe doro anya na a n'ịghọ aghụghọ ule na ebe a ga-eji ya ekwentị mọbụ ndị ọzọ, ma na-eme kpọmkwem ekwentị oku ha, ma ọ bụ karịa ọtụtụ mgbe ọ bụghị, site n'izite ederede ozi, ha na-eche bụ ndị a dị mma n'ụzọ-agwa ya okwu ha n'ihi na ha nwere ike kama ehichapụ si ekwentị akụkọ ihe mere eme. N'otu oge ahụ, abata ederede ozi a na nzuzo hụrụ pụkwara kama ehichapụ ama okokot, otú ahụ ọbụna na-echefu jide ya ekwentị ga-enye gị ihe ọ bụla clues ya n'ịghọ aghụghọ ule na omume.
Ozi ọma ahụ bụ, n'ihi na nkà na ụzụ ọganihu cell na programmụ na égwu, e nwere ugbu a, otú i nwere ike inyocha gị ebe ederede ozi - na-ege ntị na ya oku, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iso na tere.
Olee otú Iji Nyochaa Ya Texts
Ana m agaghị na-aga n'ime iwu okwu, ebe a. Ịpụta ihe ka na-ekwu na ọtụtụ mba na-ekwu na ọ ga-e weere n'uzo na ezighi ezi gaa ledoo on a ọzọ na ekwentị na-enweghị ha ikike. Aga m na-ahapụ ya ka ị na-ahụ gị nwere otu iwu ka ị na-ebi. E nwekwara disclaimers, ịdọ aka ná ntị ma nwetakwuo ihe iwu na ndụmọdụ na weebụsaịtị nke mgbere ndị a na ngwaahịa. Ka m dị na-ezo na ya N'ezie, ọ bụghị n'uzo na ezighi ezi ịzụta dị nnyocha mmemme - nnọọ na ị kwesịrị ịkpachara anya na otú ị na-eji ha.
Na kwuru, ngwaahịa onwe ha n'oge dị nnọọ pụrụ ịtụkwasị obi ma na ọtụtụ ọrụ ngwa. Ozugbo ebudatara ndị lekwasịrị ekwentị, na ị ga-enwe ike ina ozi zigara echedoro online nkesa ebe ị pụrụ weghachite ya mgbe ọ bụla ị chọrọ ma gị onwe gị ijeụkwụ. Ma i nwere ike ime nke a n'ebe ọ bụla n'ụwa na-eji ihe ọ bụla internet-dịkwa njikere na ngwaọrụ na ị ga n'aka - tinyere gị onwe gị na ekwentị mkpanaaka.
Ihe di iche iche, ihe i nwere ike inyocha ịdị iche dabere na ole ị chọrọ ịkwụ ụgwọ. Mgbe obere njedebe, a nke nkiti ngwugwu ga-enye gị ikike ledoo na ederede ozi, ịhụ ekwentị oku na akụkọ ihe mere eme (nke a na-agụnye oge, oge na ọnụ ọgụgụ a na-akpọ ma ọ bụ ịkpọ - na kọntaktị aha ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị na-ejikọrọ a aha ekwentị na adreesị akwụkwọ). I nwekwara ike ile ozi ịntanetị, IMs ndị ọzọ n'ụdị nke chat na mere online, anya internet Farisii ahụ mere, ịhụ ihe ọ bụla foto ma ọ bụ foto zitere wee nata ndị ekwentị. Nke a bụ ihe niile mara mma dị ike stof. Dị nnọọ ike na-agụ ihe niile na-abata ma na outbound ederede ozi (ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-kama-ehichapụ) nwere ike niile dị mkpa ka ị chọpụta kpọmkwem ihe ọ na-aka.
Ọzọ ngwa nke na-abịa na nke nkiti ngwugwu bụ ikike nke soro ekwentị ebe (ya mere ya ebe) via Google égwu. Nweghi ihe kpatara ya na-eche kpọmkwem ebe ọ bụ mgbe ọ na-ekwu na ọ bụ ihe si na-akpọ goofu ma ọ bụ na-arụ ọrụ e weere mbubreyo. Ọ bụrụ na nkewa na ngwa na-egosi ekwentị ebe ọzọ, ị anya mara banyere ya!
N'otu aka ahụ, ma ọ bụrụ na ọ na e enweta oku na ọ ịbụ zoro ezo banyere, ị pụrụ ọbụna nwere ike dee a oku - ma ọ bụ ọbụna ige ntị na Live - Ọ bụrụ na ị nweta nkwalite ndị ubé dị oke ọnụ karịa premiom nchịkọta. Nke a bụ n'ezie ịrịba stof na n'onwe Anya afọ ole na ole gara aga ga-nyere ha nri na ogwe aka nke - ma ugbu a ị na-ikama a nnyocha ike na dị nnọọ ole na ole ebu na ole na ole presses nke a button.
Yana dị iche iche ngwa iji họrọ si, Ị nwere ike ịpụ na nke dị iche iche ogologo oge ị na-achọ iji ngwa n'ihi na. Software dị ike na ọtụtụ ebi akwukwọ jikwaa ịchọta ihe ha kwesịrị ịmata ọsọ ọsọ. N'ihi nke a na Nsukka nyere nhọrọ iji dị kwụọ ụgwọ 1 ọnwa were - nke a nwere ike na-arụ ọrụ bụrụ ezigbo ego, kama inwe-akwụ na-aga na ndebanye aha ma ọ bụ premiom price maka agha ezigbo ojiji nke ngwaahịa na. Yana dị iche iche ugwo nhọrọ maka ngwa na oge-ogologo, ị nwere ike obi ike na ugwo usoro na iche na usoro ụzọ ịkwụ ụgwọ ma kpamkpam pụrụ iche.
Akụkụ ọzọ nke ihe a nile na i kwesịrị ịma banyere bụ na ozugbo awụnyere na iche na ekwentị, software na ke kpukpru emi nlekota n'ihi na ị bụ kpam kpam-adịghị ahụ anya ka onye ọrụ. Ọ ga-amaghị na ọ bụ n'ebe ahụ ga-enwe ụzọ ndị maara na gị ugbu a nwere ihe nzuzo na windo ya n'ụwa nke na-ekpughe ihe nile ya n'ịghọ aghụghọ ule na ụzọ gị.
Olee otú m nwere ike soro ozi ederede na ekwentị ọzọ free
App Iji Sochie Text Ozi On na ekwentị ọzọ na exactspy nwere nza nke ọrụ:
Ị nwere ike Download: Akpama App Iji Sochie Text Ozi On na ekwentị ọzọ ?
App to read text messages on another phone, App to receive text messages from another phone, App to receive text messages from another phone iphone, App to see text messages on another phone, Ngwa soro ozi ederede na ekwentị ọzọ, Olee otú m nwere ike soro ozi ederede na ekwentị ọzọ free
← Mobile ekwentị Nledo Software Free Download
→ Akpama App Iji Nledo Na Òtù Ọlụlụ Text Ozi ?